Al-Shabaab Oo Si buuxda ula wareegay SYL iskana difaacay Weeraro lagu soo qaaday. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-Shabaab Oo Si buuxda ula wareegay SYL iskana difaacay Weeraro lagu soo qaaday.
On Dec 10, 2019 1,088 0
Faafaahinno horudhac ah ayaa laga helayaa weerarka xoogan ee ka soconaya gudaha hotelka SYL ee kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Dagaalyahanno aad u hubeysan oo katirsan guutooyinka Inqimaasiyiinta iyo Naftood huriyaasha ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku guuleystay iney gudaha u galaan hotelka SYL, kadib markii ay toogteen ilaaladii hotelka.
Hadda, waxay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab si buuxda u maamulayaan hotelka SYL, halkaas oo ay ka wadaan toogasho ay u geysanayaan xubnaha muhiimka ah ee ku jira hotelka.
Saraakiil katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka Al-Shabaab ee Al-Andalus ayaa xaqiijiyay in ciidamadooda ay ku guuleysteen iney iska caabiyaan weeraro dhowr ah oo ay soo qaadeen askarta dowladda federaalka.
“Mujaahidiintu weli iyaga ayaa heysta Hotelka, waxayna iska caabiyeen ugu yaraan 4 weerar oo ay soo qaadeen maleeshiyaatka murtadiinta, kuwaas oo midkii u dambeeyey uu ahaa weerar ay u adeegsadeen gawaarida dagaalka, balse Allaah fadligii waan iska caabinay, mid ka mid ah gaadiidkoodii ayeyna uga carareen ilinka Hotelka ka dib markii aan qarax xoogan la beegsadanay” sidaas waxaa yiri sarkaal ka tirsan Mujaahidiinta oo la hadlay Idaacadda Andalus.
Warar la helayo waxay sheegayaan in gudaha hotelka ay bilqanyihiin meydadka xubno aan wejiyadooda la aqoonsan oo ay si xun u haleeshey rasaasta ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana hotelka degan xubno muhiim ah oo hadda mugdi ku jiro masiirkooda.